असारको सुरु`वाती दुई साता लकडाउन खु कुलो बनाउन नहुने सेनाको अडान !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/असारको सुरु`वाती दुई साता लकडाउन खु कुलो बनाउन नहुने सेनाको अडान !!
काठमाण्डौँ, २५ जेठ । नेपाली सेनाको समेत सक्रिय सहभागिता रहेको कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सी`सी`एम“सी) ले असारको सुरुवाती दुई साता लकडाउन खुकुलो बनाउन नहुने बेग्लै प्रस्ताव तयार पारेको छ ।
बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउँदा कोरोना संक्र`मण अझै बढ्ने र जनमासनसमा त्रासको वातावरण बन्ने उसको नि`ष्कर्ष छ । उसले भनेको छ, बढ्दो संक्रमण र समुदाय स्तरमा समेत संक्रमण फैलिएकाले खुकुलो डाउनमा जाँदा कुनै पनि बेला भयावह स्थिति सिर्जना हुनसक्छ ।’
प्राप्त मस्यौदा अनुसार सीसीएमसीले लकडाउन खुकुलो गर्ने पाँच तह बनाएको छ । जेठ ३२ सम्म कायम रहेको बन्दीब न्दी सकिएको दुई साता सम्म पहिलो चरण लागू गर्ने उसको प्रस्ताव छ । यो चरणमा सुरक्षा उपाय अपनाएर आन्तरिक सवारी उडान आंशिक रुपमा खोल्न सकिने उल्लेख छ । यसबाहेक अरु बन्दाबन्दी अहिलेकै स्वरुपको लागू हुनेछ ।